Nicki Minaj နဲ့ Eminem တို့ ချိန်းတွေ့နေတာ ဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လား
On May 28, 2018 May 28, 2018 By PPT
လတ်တလော သတင်းတွေမှာတော့ Nicki နဲ့ Eminem တို့ ချိန်းတွေ့နေကြပြီဆိုတဲ့ သတင်းဟာ ပြန့်လွင့်လျက်ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးထွက်ရှိတဲ့ သတင်းတွေအရတော့ ဒီသတင်းဟာ မဟုတ်မှန်ကြောင်းနဲ့ Nicki နောက်ပြောင်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ရှင်းပြထားတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါဆို Nicki က ပရိသတ်ကို ဘယ်လိုနောက်ပြောင်လိုက်ပါလိမ့်။
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က Nicki ရဲ့ instagram account မှာ video တစ်ခုတင်ခဲ့ပါတယ်။ ထူးဆန်းတာက caption က စာသားလေးပါ။ “I met Slim Shady. BaggedaEM!!!” ဆိုပြီး Eminem ကိုညွှန်းဆိုတဲ့စာသားလေးကို rap စာသားလေးအဖြစ်ရေးတင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို video တင်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ follower တစ်ယောက်ကမေးတဲ့ “မင်းနဲ့ Eminem ချိန်းတွေ့နေကြပြီလား” ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလည်း “ဟုတ်တယ်” ဆိုတဲ့တစ်ခွန်းနဲ့ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် Eminem ကလည်း Nicki ရဲ့ ဝန်ခံချက်အောက်မှာ ဒါဟာအမှန်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဒီကိစ္စကို မင်္ဂလာပွဲမတိုင်ခင်အထိ လျှို့ဝှက်ထားသင့်ကြောင်း ဝင်ရောက်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ Nickiဘက်မှလည်း “ဟုတ်ပြီ.. ဒါဆိုငါအိမ်ပြန်ရောက်ရင် ဆက်ပြောမယ်” လို့ပြန်လည် ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Nicki ရော Eminem ရော နှစ်ဦးစလုံး ထပ်မံဖြေကြားထားတာကိုမတွေ့ရတော့ပြန်ပါဘူး။ ထို့အတွက် ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်း Nicki တကယ်ပြောတာများဖြစ်နေမလား။ သူတို့နှစ်ဦး တကယ်ပဲချိန်းတွေ့ကြနေပြီလားလို့ သံသယဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ Nicki နဲ့ နီးစပ်တဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုက “Rapper နှစ်ဦးဟာ နောက်ပြောင်နေကြတာသာဖြစ်ကြောင်း၊ သူတို့နှစ်ဦးကြားမှာ ထိုလိုဆက်ဆံရေးမျိုးမရှိကြောင်း” ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
လတ်တလော နာမည်ကြီးနေတဲ့ Nicki နဲ့ Eminem တို့ရဲ့ instragram ပေါ်မှ အပြန်အလှန်နောက်ပြောင်မှုတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့လတွေက Vulture မှာ Relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖွင့်ပြောခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ ထိုစဉ်က Eminem ဟာ သူဒီတလော Kim Scott နဲ့ ကွာရှင်းပြီးကတည်းက ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံမှုတွေ သိပ်မလုပ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ချိန်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ချင်လျှင်လည်း Tinder ကိုသုံး၍ချိန်းတွေ့ခဲ့လေ့ရှိကြောင်းနဲ့ ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ ထိုလိုအချိန်မျိုးကို club သွားခြင်းဖြင့်ရှာဖွေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Nicki အနေနဲ့ကလည်း လတ်တလောမှာ အယ်လ်ဘမ်အသစ်ထွက်ရှိဖို့ သိပ်ကိုအလုပ်များနေသူပါ။ သူမရဲ့ အယ်လ်ဘမ်အသစ်ကို လာမည့် ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့မှာထွက်ရှိဖို့ ကြော်ငြာထားပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့က အယ်လ်ဘမ်အသစ်ကို သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့မှ ထွက်ရှိတော့မှာဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားထားပြီး အယ်လ်ဘမ်အသစ်ထွက်ရှိပြီးတဲ့နောက် ကမ္ဘာလှည့်ဖျော်ဖြေပွဲ(tour) ကိုတော့ စက်တင်ဘာလလောက်မှာစတင်မှာဖြစ်ကြောင်း ကြော်ငြာခဲ့ပါတယ်။
PREVIOUS POST Previous post: တစ်နေ့တစ်ခြား အောင်မြင်ကျော်ကြားလာတဲ့ Kpop Idol အဖွဲ့များအကြောင်းတစေ့တစောင်း
NEXT POST Next post: အခမဲ့ဝင်ကြေးအတွက် Mobile app ထုတ်လုပ်သွားမယ့် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်